Ihe niile gbasara Bipute & Gwuo, Bipute ma kpọọ - Ikkaro
Bipute ma kpọọ
Akụkụ raara nye Bipute & Egwu. Ma na-agwa egwuregwu na Mee N'onwe Gị egwuregwu usoro.
Bipute ma kpọọ, Biputa ma kpọọ. Ọ bụ ụdị egwuregwu "dị mfe" nke ị nwere ike iji ngwa nbipute kpọọ, ebe ọ bụ na e mere ha iji bipụta ma kpọọ na akwụkwọ.
Ọsịsọ iji nweta, mana ha nwere ike ịnwe iwu dị mgbagwoju anya na igwe. Ekwesighi imeghari gi site na idi mfe nke imeputa ya.
A modality na ya kwadoro nke nwere ike ọ gaghị ama nke ọma, mana ọ bụrụ na ị nye ya ohere ọ ga-enye gị nnukwu oge na ọtụtụ oge nke obi ụtọ.
Bipute ma kpọọ, mbido egwuregwu egwuregwu na omenala Mee N'onwe Gị
Izu ole na ole gara aga na twitter ekwuru m na ha achọpụtala m nkà nke Bipute & Gwuo, na kemgbe ahụ m na-eme nnyocha iji hụ ihe ụwa a na-enye ma ọ bụrụ na ọ na-atọ ụtọ ịgbakwunye ya na Egwuregwu ngalaba
The Bipụta na Play M gabigawo ihe e kere eke nke osisi egwuregwu na n'ozuzu na m dara na ịhụnanya, Echeghị m na na egwuregwu egwuregwu enwere eluigwe na ala nke aka ya maka Mee N'onwe Gị.
Ihe kacha ju m anya bụ na ọtụtụ ajụjụ na obi abụọ ndị mmadụ na-enwe mgbe m na-eke iberibe enwere m ike idozi na / ma ọ bụ nye ndụmọdụ. Mepụta mpempe na ihe dị ọnụ ala, rụọ ọrụ dị iche iche, wdg. M na-agụ ma na-ede banyere ihe a niile ruo ogologo oge, naanị na ị ga-etinye ya na ihe ndi ozo.
Nọgidenụ na-agụ ihe